Jaamacada Jigjiga Oo Ay Maanta Kaqalinjabisay Dufcadii 7aad Ee Sanadkan 2007-da. - Cakaara News
Jaamacada Jigjiga Oo Ay Maanta Kaqalinjabisay Dufcadii 7aad Ee Sanadkan 2007-da.
Jigjiga(CN) Sabti.June.27.2015, munaasibada qalinjabinta dufcadii 7aad ee jaamacada Jigjiga oo maanta si heer sare ah uga qabsoomtay hoolka wayn ee jaamacada Jigjiga.
Munaasibadan qalinjabinta dufcadii 7aad ee ardayda jaamacada Jigjiga ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, masuuliyiinta ugu saraysa jaamacada Jigjiga ugu horeeyo madaxwaynaha jaamacada Dr Cabdinasir Axmed, kuxigeenkiisa Mudane Siciid Maxamed, masuliyiin sare oo kasocotay jaamacada Haramaya, hogaamin dhaqameedka, waalidiinta, kooxaha fanka iyo sugaanta ee dalka iyo deegaanka, iyo ardaydii qalinjabinaysay.
Dufcadan 7aad ee maanta ka qalin jabisay jaamacada Jigjiga oo tiradoodu dhantahay 1695 arday ayaa isugu jiray heerka koobaad (Degree) iyo heerka labaad ee Master-ka, kuwaas oo tiro ahaan aad uga badan dufcadihii hore ee jaamacada ka qalinjabiyay.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayntii kasoo jeediyay khud bad bogaadin ah ayaa u hanbalyeeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacada islamarkaana ugu dardaarmay in ay sii laba jibaaraan cilmiga ay barteen oo ay uga faaiideeyaan bulshadooda iyo dalkoodaba.
Dhankiisa Dr Cabdinaasir Axmed oo ah madaxwaynaha Jaamacada ayaa isugana halkaasi kasoo jeediyay khud bad uu kaga hadlay waxqabadka jaamacada islamarkaana ugu hanbalyeeyay ardayda maanta ka qalin jabisay Jaamacada.
Wuxuuna sheegay in sanadkii hore lafuray macadka Luuqada Afkasoomliga, in lakordhiyay goobaha ay jaamacadu ka hawlgasho, iyo inay taageerto jaamacadu dugsiyada kadhisan deegaanka. Sidoo kale waxaa uu ka warbixiyay kaalinta horumar ee jaamacadaha dalka gaar ahaan DDSI oo haatana la dhagax dhigay jaamacdii labaad ee Qabridahar.
Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hada kahor ay soo ragaadiyeen talisyadii hore ee dalka soomaray oo dhamaan qoomiyadaha Itoobiya xaquuqdoodii xaqiray kadibna aan ka faaidaysan bilowgii curashada Itoobiyada cusub ee EPRDF maadaama ay ururo nabadiid iyo horumar diidba ah dib u la hadheen, ayaa sanadadii ugu danbaysay waxaa deegaanka ka hana qaaday horumar balaadhan oo dhan walba ah kaasoo ay iska kaashadeen dawlada federaalka iyo xukuumada ka arimisa DDSI oo ka go'aanaansho dhab ah latimid.
Waxaana sektorka waxbarshada si xawli ah kor loogu qaaday dhamaan gobolada deegaanka oo helay fursadaha waxbarsho oo aad loo balaadhiyay, kuwaas oo ay kamid yihiin dugsiyada sare, kuliyadaha iyo mac'hadyada oo ay ugu horeeyaan TVET-ka oo 9=ka gobolba qorshihiisa laga hirgaliyay.